Ogaden News Agency (ONA) – Dawlada UK oo Sheegtay Ineey Somaliya Ciidan U Dirayso.
Dawlada UK oo Sheegtay Ineey Somaliya Ciidan U Dirayso.
Posted by ONA Admin	/ September 29, 2015
Boqortooyada Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday ineey wadanka Somaliya iyo Koonfurta Sudan udiri doonto ciidan gaadhaya 370 askari. Ujeedada ka dambaysa ciidankan Somaliya loodirayo ayaa lagu sheegay ineey xoojin doonaan hawlaha nabad ilaalinta ee Ciidanka Midawga Africa ay ka wadaan wadanka Somaliya.
Ciidamadan oo intiisa badan lagu wado in lagayn doono dalka Koonfurta Suudaan ayaa tababar militari iyo talooyinka laxidhiidha culuumta militariga siin doona askarta Qaramada Midoobay ee kusugan wadanka Koonfurta Sudan.
Wararka ayaa intaas kudaraya in 70 askari oo ciidamadaas ka tirsan ayaa sidoo kale waxay ciidamada Midowga Afrika ee jooga Soomaaliya ka caawin doonaan dhanka Arimaha Bulshada gaar ahaan caafimaadka iyo hawlaha la xidhiidha.
Ra’iisul Wasaaraha Boqortooyada Ingiriiska David Cameron ayaa shaaca kaqaaday in ciidamada kasocda dalkiisa ay wadamada Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan ay ka caawin doonaan ladagaalanka waxa uu ugu yeedhay ladagaalanka argagixisada iyo tahriibka.